Degso Advanced SystemCare loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (48.00 MB)
Degso Advanced SystemCare,
Markaad soo degsato Advanced SystemCare, waxaad yeelan doontaa barnaamij ku habboon nidaamka oo ka mid ah barnaamijyada ugu guulaha badan xagga dayactirka kumbuyuutarka iyo dardargelinta kumbuyuutarka.
Sidee loo rakibaa Nidaamka Daryeelka Sare?
Advanced SystemCare, oo ah softiweer aad kala soo bixi karto oo aad bilaabi karto inaad si bilaash ah ugu isticmaasho kombiyuutaradaada, waa aalad qalabaynta nidaamka oo ka kooban aalado badan oo faaiido badan leh oo aad u isticmaali karto inaad ku soo nooleyso kumbuyuutarkaaga, kaasoo bilaabay inuu si tartiib tartiib ah u shaqeeyo waqti kadib, kadib adoo adeegsanaya in muddo ah kuna soo celiya maalintiisii ​​koowaad. AdvancedCareCare wuxuu kuu suurta gelinayaa inaad fuliso howlo dayactir adag iyo habsami u socod ah dhowr jeer oo keliya.
Waxaa ka mid ah qalabka dayactirka iyo hagaajinta ee Advanced SystemCare qalab ka caawiya hagaajinta khaladaadka diiwaanka iyo nadiifinta feylasha qashinka ah. Khaladaadka noocan oo kale ah iyo feylasha aan loo baahnayn waxay keenaan in nidaamkaaga qalliinka uu furmo oo la xiro goor dambe, kumbuyuutarkaaguna uu habsaamo amarrada. Nidaamka Advanced SystemCare, waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa kala-goynta diskiga iyo kala-soocida diiwaanka. Sidan oo kale, waxqabadkaaga disk sidoo kale wuu kordhayaa.
Sidee loo dedejiyaa kumbuyuutarka leh Advanced SystemCare?
AdvancedCareCare wuxuu siiyaa dadka isticmaala fursad ay ku qaadaan talaabooyin amni marka laga reebo xawaaraha xawaaraha Windows iyo xawaareynta hawlgalka Windows. Qalabka ilaalinta biraawsarka ee Nidaamka Advanced SystemCare wuxuu bixiyaa xalal looga saarayo fiilooyinka furaha iyo ka hortagga isbeddelada bogga. Haddii biraawsarkaaga internetka ay la wareegeen barnaamijyo aan loo baahnayn oo 3aad ah iyo waxyaabo lagu daro, waad adeegsan kartaa qalabkan oo aad ku beddeli kartaa bogga. AdvancedCareCare wuxuu si joogto ah u kormeeraa biraawsarkaaga wuxuuna ka hortagaa wax ka beddelka aan la oggoleyn ee boggaaga iyo mashiinka raadinta asalka ah.
Nidaamka Daryeelka Sare, waxaad si otomaatig ah uga saari kartaa raadadka shabakaddaada internetka. Waad u habeyn kartaa barnaamijka si otomaatig ah u tirtirto raadadka asturnaanta markii biraawsarkaagu xiran yahay.
AdvancedCareCare sidoo kale waxaa kujira qaybta Qalabka Qalabka taas oo ka dhigaysa mid fudud in la helo qalab kale oo faaiido leh oo ay soo saartay IObit. Qeybta Turbo Power ee Advanced SystemCare waxay kuu ogolaaneysaa inaad kordhiso waxqabadka kumbuyuutarkaaga ee ciyaaraha ama barnaamijyada sida ku xusan baahidaada. Qalabkani wuxuu hubiyaa adeegyada nidaamka iyo adeegyada xisbiga 3aad ee Windows, wuxuu joojiyaa kuwa aan muhiimka ahayn wuxuuna siiyaa ilo dheeraad ah codsiyada ama ciyaaraha aad ka shaqeyneyso. Sidaa darteed, ciyaarahan iyo barnaamijyadan ayaa si raaxo leh u shaqeynaya isla markaana dhibcaha waxqabadka ayaa laga hortagayaa.
Maxaa ku Cusub Nidaamka Daryeelka Sare 13
Badbaadinta emaylka (Cusub): Waxay xannibayaan xiriiriyeyaal xun iyo degello emaylkaaga loogu talagalay Gmail, Muuqaalka iyo Yahoo Mail ee Internet Explorer, Firefox, Chrome iyo Edge.
Ku-fiicnaanshaha Bilowga: (La hagaajiyay) Dami waxyaabo badan oo bilowga ah oo ay la socdaan xog-ururintii ugu dambeysay.
Cusbooneysiinta Software-ka (Kobcinta): boqolkiiba 60 barnaamijyo cusub oo dheeri ah ayaa taageera cusbooneysiinta fudud.
Ka jooji Barnaamijyada Aan Nabdoonayn (Waa La Kobcay): Taageerida lagu xayiro barnaamijyada magaca shirkadda
Taageerada luuqada Turkiga.
Isku xirnaanta qaabdhismeedka wanaagsan.
Waxay bixisaa qalab xoog leh oo loogu talagalay hagaajinta nidaamka.
Advanced SystemCare Noocyada
Cabirka Faylka: 48.00 MB